बालुवामा आगो बालेर सबैलाई चकित बनाए १५ बर्षीय बाल बैज्ञानिक बिजयले ! (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/बालुवामा आगो बालेर सबैलाई चकित बनाए १५ बर्षीय बाल बैज्ञानिक बिजयले ! (भिडियो सहित)
झापा, दमक, ८ पुस । रोबर्ट, ब म, ,पानि जहाज लगायतमा सामाग्री बनाएर केहि समयदेखि चर्चामा आएका सल्यानको मेलघारीका एक १५ वर्षे बिजय रानालाई सबैले बाल बैज्ञानिक भनेर चिन्ने गरेका छन् । उनै बिजयले हाल भने बालुवामा आगो बालेर सबैलाई चकित बनाएका छन् ।
गरिब परिवारमा जन्मिएका बिजय अहिले भने झापाको सुरुंगामा बस्दै आएका छन् । उनको यो क्षमतालाई माथि पुराएर यो देशको नाम विश्व सामु चिनाउन सहयोग गर्ने उदेश्यले उनलाई बसन्त थपलियाले आफ्नो घर झापा सुरुंगामा ल्याउनु भएको छ ।
सानो उमेर देखि नया कुराहरु सिक्ने र बनाउने उनको स्वभाभ रहेछ । स्थानीय, गाउँले र नगरपालिकाले साथ दिएको छ । उनले हावाबाट बिजुली बाल्ने मेसिन , पानि जहाज , रोवट लगायत अन्य सामान बनाएका छन् भने अब रकेट र हेलिकप्टर बनाउने योजनामा छन् । उनलाई आर्थिक रुपमा पनि धेरै समस्या परेको हुदा आर्थिक सहयोग गर्न उनको यो भिडियोलाई सबैले शेयर गर्न अनुरोध गरिएको छ । उनै बिजयले बालुवामा आगो बालेको भिडियो तल हेर्नुहोस्-
कमला घिमीरे संग दोहोरी गाउन कहाँ बाट आए नयाँ बाल गाएक , गैंडाकोट महोत्सबमा चल्यो दोहोरी (भिडियो हेर्नुस्)
गाउँका सबै युवाहरु परदेश हिँडेपछि …[भिडियो हेर्नुहोस् ]
गाईलाई जेब्रा बनाउँदा यस्तो अनौठो कुराको फाइदा ! वैज्ञानिक अध्ययनले पत्ता लगायो रोचक तथ्य
समुद्रमा खस्यो आईफोन, ह्वेलले गरिदियो फिर्ता (भिडियोसहित)